Kuntwela ezansi ngokubuya kwabatshalimali eNingizimu Afrika, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
IZINKAMPANI zakwamanye amazwe zijwayele ukuhlela imihlangano neminyango kahulumeni ethile kanjalo neBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ngaphambi kokutshala imali eNingizimu Afrika. Ithe ukunyuka le mihlangano muva nje.
Abatshalimali abagcini nje ngokubuza umbono nokuhlaziya kwethu ngezimboni abasebenza kuzona kuphela kodwa babuye babuze ukuthi kwenzekani eNingizimu Afrika, emnothweni, kwinqubomgomo nasemphakathini. Bafuna ukwazi nokuthi sicabangani ngekusasa lezwe.
Nabo bayasitshela ukuthi bacabangani; okuningi kwakho kuyathembisa. Bahlale belwenzile ucwaningo, bayaqinisekisa ukuthi bayawazi umlando wethu nokudingeka kwemithetho ethile ukuze kulungiswe lapho okungabanga khona kahle ubulungisa kudala. Bakwamkela njengengxenye yokutshala imali eNingizimu Afrika futhi bacabanga okuhle ngezwe ngenxa yokuthi balapha ngoba befuna ukutshala.
Wukungaqondakali kwenqubomgomo okubuye kubathuse kodwa bayabuza ukuthi thina sibona kanjani. Umyalezo esibanika wona uyethembisa kodwa futhi nokungekuhle siyakusho. Kunzima ukuphumelela kwezinye izingxenye nokufinyelela kuleso sigaba ezikusona. Laba batshalimali sebeyayazi imicikilisho edingekayo eNingizimu Afrika. Kumele babheke kwezinye izinto ezingasebenzi kahle njengokusebenza kukagesi obuye ucinywe. Okunye okusemqondweni wabo wudlame olwabheduka ngoJulayi nenkohlakalo.
Sihlale sibatshela izinyathelo esizithathayo ukuze silungise izinkinga esinazo nezithiyo ezenza ukuthi izinto zihambe kancane. Zimbili izindawo eziyinkinga ezikhinyabeza umnotho wethu – wuhlelo lwezemfundo olungekho esimweni esihle nomthetho wezisebenzi oqinile. Kumele sikuveze ukuthi isencane inqubekelaphambili kulezo zindawo zombili.
Nokho siyakugqamisa nokuhle esinako. Kuningi okubalulekile esinako. Intando yabantu iqinile kanti ezobulungisa zizimele. Zikwazile futhi ukumelana nengcindezi ngesikhathi sokugwamanda umbuso nangemva kwako njengoba abebethinteka bebezisola ngokuthi azizimele ngokwanele. Muva nje ezobulungisa bezihlaselwa ngezinhloso zepolitiki kodwa siyabathembisa abatshalimali ukuthi zizoloku zimile njalo ziqinile.
Sikhululekile ukuthi singakhuluma noma yini futhi sinabezindaba abazimele nezinhlangano zomphakathi ezikwazi ukutshela uhulumeni uma ungenzi kahle.
Ekutshaleni imali inzuzo ingaba nkulu idlule eyamazwe athuthukile nenqwaba yasathuthuka. Nakuba ubungozi bubuningi lapha kodwa kuningi okuhle esinako okudlula amanye amazwe asathuthuka okubalwa kukona izimboni ezizimele ezenza nemboni yezimali esezingeni eliphezulu.
Sibuye siqhakambise izinguquko ezibalulekile esezenzekile. Ngonyaka odlule uwodwa nje ziningi. Ukugunyazwa kwezinkampani ukuthi zizikhiqizele ugesi ongafinyelela ku-100MW ngaphandle kwelayisensi kusuka ku-1MW; indali ye-spectrum isiqediwe; uphiko eHhovisi likaMengameli olubheke ukunciphisa imidanti eminyangweni kahulumeni, i-Transnet isiyenze iNational Ports Authority eqondene namachweba yawuphiko oluzimele kanti kungekudala izovumela abanye abantu bahlinzeke ngezitimela, njengenhlangano ezimele ezokwazi ukunika ezinye izinkampani indlela yokungena ohlelweni lwayo lwezitimela zezimpahla.
Indlela izivakashi zethu ezizizwa ngayo muva nje iyathembisa kakhulu. Uma singandisa izindaba ezinhle, sinciphise ezingezinhle, iNingizimu Afrika ingaba sendaweni enhle kakhulu ukuze ithathe indawo yokuba yisango lokungena kwabatshalimali e-Afrika, indlela abatshalimali abaningi abayibuka ngayo.
Ngiyazisaba izingxoxo nge-new social compact ezikwiNedlac, isigcawu sezingxoxo sikahulumeni, osomabhizinisi nezisebenzi, ezinezibophezelo ezintsha ezisusa amehlo abantu ezinguqukweni ezibalulekile nohlelo lwengqalasizinda kaR1 trillion.
Kuningi esingakwenza ukuqhuba imizamo yokuvuselela umnotho, ikakhulu ukwenza ngcono ezemfundo nokuqeda inkohlakalo kodwa kuzodinga ukuzibophezela kwawo wonke umuntu kwiNedlac.
Izethulo zoMqondisi wokuShushisa uMphakathi u-Advocate uShamila Batohi ePhalamende ngezinga lenkohlakalo yombuso bezishaqisa.
UMengameli uCyril Ramaphosa kumele asuse abakhohlakele ezikhundleni zikahulumeni. Sinelungelo lokufuna uhulumeni ongenasici njengoba inkohlakalo ingagcini ngokufadalalisa ukusimama komnotho kuphela kodwa umonakalo wayo ubuye uzwele kubantu abadla imbuya ngothi.